TaiG dia mamoaka amin'ny fomba ofisialy ny kinova 2.4.3 amin'ny jailbreak | Vaovao IPhone
TaiG dia nanala ny baniera beta tamin'ny kinova farany an'ny fitaovana jailbreak iOS 8.1.2-8.4. Na dia priori aza dia toa fanavaozana kely izany, raha ny tena izy misy ireo mpampiasa izay milaza fa nahavita nanamboatra ny fitaovany tamin'ny beta an'ny TaiG jailbreak 2.4.3, noho izany, raha tsy maintsy migadra ianao dia tena atoro anao hampiasa an'ity kinova vaovao ity.
Tsaroanay fa ny kinova taloha, TaiG Jailbreak 2.4.2 beta dia efa nanatsara ny fizotran'ny jailbreak ary heverina fa nanitsy ny olana izay nanakana ireo mpampiasa sasany tsy handrava ny fitaovany satria nijanona hatramin'ny 30% na 40% ny fizotrany. Ho fanampin'izay, beta 2.4.2 koa dia nahitana ny Cydia 1.1.23, izay ny kinova farany avy amin'ny magazay Saurik. Ilay iray izay mandraka androany ny kinova ofisialy farany, TaiG Jailbreak 2.4.1 koa dia nanakana ny fizotrany tsy hijanona amin'ny 60%.
Ny lisitr'ireo fanovana feno ho an'ny v2.4.3 dia:
Ampidiro ny kinova farany an'ny Cydia 1.1.23
Manatsara ny fizotran'ny jailbreak.
Toy ny efa niseho tamin'ny beta, dia mbola tsy misy afa-tsy amin'ny solosaina misy ny rafitra miasa Windows. Toa tsy tratry ny fanerena ny TaiG hahita ny fomba nanombohan'ny PP ny fitaovany ho an'ny OS X ary manohy manao ny zava-bitany, mandefa kinova aorian'ny kinova ka tonga lafatra ny fitaovany, zavatra mbola tsy tratrany.
Izany dia efa nilaza ary efa ela taorian'ny namoahana azy Jailbreak PP ho an'ny Mac, afaka manamafy isika fa ny jailbreak dia safidy tsara, olana ara-pitondran-tena. Tsy nisy mpikaroka fiarovana (toa i0n1c, ohatra) nilaza zavatra ratsy momba ny PP Jailbreak, ka heverinay fa tsy manana lesoka fiarovana lehibe ianao. Ho fanampin'izay, ny mpiara-miasa amintsika, Luis Padilla, dia efa nigadra niaraka tamin'ny fitaovan'ny PP ary nilaza fa mahavita azy io. Avelao i TaiG handray an-tsoratra.
1 Sintomy ny fitaovana TaiG Jailbreak 2.4.3
2 Fampianarana handrindrana ny fonja amin'ny iOS 8.1.2-8.4
Sintomy ny fitaovana TaiG Jailbreak 2.4.3
Fampianarana handrindrana ny fonja amin'ny iOS 8.1.2-8.4
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » TaiG dia namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny kinova 2.4.3. Tsy misy famantarana ny kinova Mac
Tsy hamela ahy jalbreak izany .. Diso aho rehefa manokatra TaiG: Tsy mbola hita ny mpamily Apple. Ampidino ny fametrahana ary apetraho itunes… Efa nalefako tamin'ny iTunes fa mandefa ahy ao amin'io pejy io izy nefa tsy avelako hanao jailbreak akory, misy vahaolana ve?
joselito dia hoy izy:
Josue tsy maintsy apetrakao ny iTunes it.12.0.1 raha tsy izany tsy afaka manao na inona na inona ianao
Mamaly an'i joselito
Mbola manana ambiny 50% aho ... 🙁
Famaritana fampitahana eo amin'ny iPod faha-5, iPod faha-6 ary iPhone 6